ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီမှာ ဝတ်ဆင်ဖို့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေ အကြံပြုထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေ - Lifestyle Myanmar
Home Fashion ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီမှာ ဝတ်ဆင်ဖို့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေ အကြံပြုထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေ
ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီမှာ ဝတ်ဆင်ဖို့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေ အကြံပြုထားတဲ့ ဝတ်စုံတွေ
ဒီဇိုင်နာဆိုတာ သူတို့စိတ်ကူးတည့်ရာ ဖန်တီးတတ်သူတွေပါ။ ဒီဇိုင်နာတွေဟာ လှပတဲ့ ဝတ်စုံတွေကို ဖန်တီးတတ်သလို တစ်ခါတရံမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ဖန်တီးတဲ့ ဝတ်စုံတွေက ခေတ်မီတယ်လို့ပြောရမလား? ရူးတယ်လို့ပြောရမလား? ဆိုရလောက်အောင် ထူးခြားဆန်းပြားပါတယ်။ ယခုလည်း ဒီ 2018ဆောင်းရာသီအတွက် ဒီဇိုင်နာတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ရာတွေက ဆန်းပြားတာကြောင့် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေကော ဒီထဲက ဝတ်စုံတွေကို ဘယ်သူဝတ်ရဲလဲ?
ဒီနှဈဆောငျးရာသီမှာ ဝတျဆငျဖို့ ဖကျရှငျဒီဇိုငျနာတှေ အကွံပွုထားတဲ့ ဝတျစုံတှေ
ဒီဇိုငျနာဆိုတာ သူတို့စိတျကူးတညျ့ရာ ဖနျတီးတတျသူတှပေါ။ ဒီဇိုငျနာတှဟော လှပတဲ့ ဝတျစုံတှကေို ဖနျတီးတတျသလို တဈခါတရံမှာ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ထူးထူးခွားခွား ဒီဇိုငျးတှကေို ဖနျတီးတတျကွပါတယျ။ တဈခါတလေ သူတို့ဖနျတီးတဲ့ ဝတျစုံတှကေ ခတျေမီတယျလို့ပွောရမလား? ရူးတယျလို့ပွောရမလား? ဆိုရလောကျအောငျ ထူးခွားဆနျးပွားပါတယျ။ ယခုလညျး ဒီ 2018ဆောငျးရာသီအတှကျ ဒီဇိုငျနာတှေ ဖနျတီးထားတဲ့ လကျရာတှကေ ဆနျးပွားတာကွောငျ့ စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ဘျောဒါတှကေော ဒီထဲက ဝတျစုံတှကေို ဘယျသူဝတျရလဲ?
Previous articleသင့်ကို ပိုပြီးခေတ်ဆန်ကြော့မော့စေမယ့် ဆံပင်စတိုင် ၈မျိုး
Next article၀က်ခြံကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အစားအစာများ